တောင်နဲ့မြောက် ကိုရီးယားသမ္မတ၂ ဦးတွေ့ဆုံပွဲမှာ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဘာတွေ ကျွေးမွေးမှာလဲ?
တောင်နဲ့ မြောက် ကိုရီးယား သမ္မတ ၂ ဦးတွေ့ဆုံပွဲမှာ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဘာတွေ ကျွေးမွေးမှာလဲ?
26 Apr 2018 . 4:49 PM
တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ Moon Jae In နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားသမ္မတ Kim Jong Un တို့ ၂ဦးရဲ့ ရှာမှရှားတဲ့ သမိုင်းဝင်တွေ့ဆုံပွဲကြီးကတော့ တစ်ကယ်ဖြစ်ပေါ်လာပါပြီ။
North and South Presidents Meet up
ဒီသောကြာနေ့မှာ တွေ့ဆုံကြမယ့် သမ္မတ ၂ ဦးရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ သမ္မတ ၂ ဦးရဲ့ လုံခြုံရေး၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတို့ကို ရှေးရှုပြီး အစားအသောက်ကအစ စနစ်တကျ လုံခြံရေးအထပ်ထပ်နဲ့ သေချာပြင်ဆင်ထားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Moon Jae In and Kim Jong Un
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ့် နေရာကတော့ ၂ဦး၂ဖက်လုံး စစ်ကင်းမဲ့ဇုံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၂နိုင်ငံလုံးကို ပိုင်းခြားထားတဲ့ နယ်မြေမှာတွေ့မယ်လို့ အိမ်ပြာတော်က အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Menu (Photo from Blue House Facebook Page)
ကျွေးမွေးမယ့် အစားအစာတွေကတော့ ၂ နိုင်ငံလုံးက နယ်မြေဒေသတွေရဲ့ရိုးရာကို ထင်ဟပ်စေမယ့် အစားအစာတွေဖြစ်ပြီး အစားအစာတစ်ခုစီမှာကိုက အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ ပြည့်ဝနေမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ဟင်းပွဲတွေထဲမှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သမ္မတ ၃ ဆက်ရဲ့ ဇာတိမြေရိုးရာစာတွေ ပါဝင်ပြီး ကင်ဂျုံအန် ငယ်စဉ်က ဆွစ်ဇာလန်မှာ ပညာသင်ကြားတုန်းက စားခဲ့ရတဲ့ အာလူးကတ်တလိပ်ပုံစံ အစားအစာလည်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စစ်ကင်းမဲ့ဇုန်ထွက် အသီးအနှံတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ Bibimbap လည်းပါဝင်ပါတယ်။
Naengmyun လို့ခေါ်တဲ့ ခေါက်ဆွဲအေးကိုတော့ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပြုံယမ်းမြို့ရဲ့ နာမည်ကျော်စားဖိုမှုးနဲ့ သူ့ဝန်ထမ်းကိုယ်တိုင် ခေါက်ဆွဲလုပ်စက်နဲ့သေချာပြင်ဆင်ပေးမှာပါ။
တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ မွန်ဂျေအင်းက မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပြုံယမ်းမြို့ဒေသစာဖြစ်တဲ့ Okryu Gwan စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ ခေါက်ဆွဲအေးကို စားချင်ပါတယ်လို့ တောင်းဆိုတဲ့အတွက် မြောက်ကိုရီးယားကလည်း ဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံခဲ့ပါတယ်လို့ အိမ်ပြာတော်ပြောခွင့်ရသူတစ်ဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လာမယ့် သောကြာနေ့တွေ့ဆုံပွဲအတွက် ဘယ်လိုအချိန်ဇယားမှ မထုတ်ပြန်ထားသေးပေမယ့် ခေါင်းဆောင် ၂ယောက်လုံးကတော့ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ နျူကလီးယားလက်နက်ထုတ်လွှတ်မှုတွေကို စွန့်လွှတ်ဖို့အတွက် အဓိကထားတိုင်ပင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ မွန်ဂျေအင်းကတော့ ” ကျွန်တော်တို့ဟာ အခုချိန်မှာ နျူကလီးယားစစ်လက်နက်တိုက်ခိုက်မှုကင်းစင်ရေးနဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဆီကို စစ်ရေးအရ အတင်းအကြပ်သွားတော့မှာ မဟုတ်ဘဲ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဆွေးနွေးသွားတော့မှာပါ” လို့ ဒီ တနင်္လာနေ့က The New York Times သတင်းစာကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
North and South Korea Presidents’ greeting
တောငျနဲ့ မွောကျ ကိုရီးယား သမ်မတ ၂ ဦးတှဆေုံ့ပှဲမှာ ဘယျလိုအဓိပ်ပာယျနဲ့ဘာတှေ ကြှေးမှေးမှာလဲ?
တောငျကိုရီးယားသမ်မတ Moon Jae In နဲ့ မွောကျကိုရီးယားသမ်မတ Kim Jong Un တို့ ၂ဦးရဲ့ ရှာမှရှားတဲ့ သမိုငျးဝငျတှဆေုံ့ပှဲကွီးကတော့ တဈကယျဖွဈပျေါလာပါပွီ။
ဒီသောကွာနမှေ့ာ တှဆေုံ့ကွမယျ့ သမ်မတ ၂ ဦးရဲ့ တှဆေုံ့ပှဲမှာ သမ်မတ ၂ ဦးရဲ့ လုံခွုံရေး၊ အန်တရာယျကငျးရှငျးရေးတို့ကို ရှေးရှုပွီး အစားအသောကျကအစ စနဈတကြ လုံခွံရေးအထပျထပျနဲ့ သခြောပွငျဆငျထားမယျလို့ သိရပါတယျ။
တှဆေုံ့ဆှေးနှေးမယျ့ နရောကတော့ ၂ဦး၂ဖကျလုံး စဈကငျးမဲ့ဇုံအဖွဈသတျမှတျထားတဲ့ ၂နိုငျငံလုံးကို ပိုငျးခွားထားတဲ့ နယျမွမှောတှမေ့ယျလို့ အိမျပွာတျောက အတညျပွုပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ကြှေးမှေးမယျ့ အစားအစာတှကေတော့ ၂ နိုငျငံလုံးက နယျမွဒေသေတှရေဲ့ရိုးရာကို ထငျဟပျစမေယျ့ အစားအစာတှဖွေဈပွီး အစားအစာတဈခုစီမှာကိုက အဓိပ်ပာယျတှနေဲ့ ပွညျ့ဝနမှောဖွဈပါတယျတဲ့။
ဟငျးပှဲတှထေဲမှာ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံ သမ်မတ ၃ ဆကျရဲ့ ဇာတိမွရေိုးရာစာတှေ ပါဝငျပွီး ကငျဂြုံအနျ ငယျစဉျက ဆှဈဇာလနျမှာ ပညာသငျကွားတုနျးက စားခဲ့ရတဲ့ အာလူးကတျတလိပျပုံစံ အစားအစာလညျး ပါဝငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ စဈကငျးမဲ့ဇုနျထှကျ အသီးအနှံတှနေဲ့ ပွုလုပျထားတဲ့ Bibimbap လညျးပါဝငျပါတယျ။
Naengmyun လို့ချေါတဲ့ ခေါကျဆှဲအေးကိုတော့ မွောကျကိုရီးယားနိုငျငံ ပွုံယမျးမွို့ရဲ့ နာမညျကြျောစားဖိုမှုးနဲ့ သူ့ဝနျထမျးကိုယျတိုငျ ခေါကျဆှဲလုပျစကျနဲ့သခြောပွငျဆငျပေးမှာပါ။
တောငျကိုရီးယား သမ်မတ မှနျဂအြေငျးက မွောကျကိုရီးယားနိုငျငံ ပွုံယမျးမွို့ဒသေစာဖွဈတဲ့ Okryu Gwan စားသောကျဆိုငျရဲ့ ခေါကျဆှဲအေးကို စားခငျြပါတယျလို့ တောငျးဆိုတဲ့အတှကျ မွောကျကိုရီးယားကလညျး ဝမျးမွောကျစှာလကျခံခဲ့ပါတယျလို့ အိမျပွာတျောပွောခှငျ့ရသူတဈဦးကပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
လာမယျ့ သောကွာနတှေ့ဆေုံ့ပှဲအတှကျ ဘယျလိုအခြိနျဇယားမှ မထုတျပွနျထားသေးပမေယျ့ ခေါငျးဆောငျ ၂ယောကျလုံးကတော့ မွောကျကိုရီးယားရဲ့ နြူကလီးယားလကျနကျထုတျလှတျမှုတှကေို စှနျ့လှတျဖို့အတှကျ အဓိကထားတိုငျပငျသှားမယျလို့သိရပါတယျ။
တောငျကိုရီးယားသမ်မတ မှနျဂအြေငျးကတော့ ” ကြှနျတျောတို့ဟာ အခုခြိနျမှာ နြူကလီးယားစဈလကျနကျတိုကျခိုကျမှုကငျးစငျရေးနဲ့ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးဆီကို စဈရေးအရ အတငျးအကွပျသှားတော့မှာ မဟုတျဘဲ ငွိမျးငွိမျးခမျြးခမျြးဆှေးနှေးသှားတော့မှာပါ” လို့ ဒီ တနင်ျလာနကေ့ The New York Times သတငျးစာကိုဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။